900mah P14A ကျစ်လစ်သိပ်သည်းငွေ့စတင်ပစ္စည်းများလက်ကား vapoizer 2017 မူရင်း Justfog သစ်ကိုဆိုက်ရောက် - တရုတ် DongGuang BEC နည်းပညာ
2017 900mah P14A ကျစ်လစ်သိပ်သည်းငွေ့စတင်ပစ္စည်းများလက်ကား vapoizer မူရင်း Justfog သစ်ကိုရောက်ရှိ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: paypal, TT, အနောကျပိုငျးပြည်ထောင်စု
100% အီးယူ TPD လိုက်နာ
လြယ္ကူခန္ဓာကိုယ်-spinning Airflow ထိန်းချုပ်မှု
ကို 100% ဂျပန်အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းကွိုင်
parameters အမှတ်တံဆိပ် Justfog
ပုံစံ P14A Kit
Atom Size ကို 14mm x ကို 66mm
ဘက်ထရီအရွယ်အစား 34mm x ကို 18mm x ကို 62mm
tank ပစ္စည်း Chrome ကို coated ကြေးဝါ, PC ကို
ကွိုင် Cylinder OCC အောက်ခြေကွိုင် / 1.2ohm, 1.6ohm
tank စွမ်းရည် 1.9ml
charger micro 5-pin ကို USB မှတ်, DC က 5V
အရောင် အနက်ရောင်, Silver,
ဖြန့်ဖြူး DG BEC
လက္ခဏာ 100% အီးယူ TPD ကိုက်ညီ
Q14 ၏ Revised version ကို
Airflow ထိန်းချုပ်မှု function ကို
constant output ကိုဗို့အား
LED4Level ဖြင့်ပြသကျန်ရှိသောဘက်ထရီ
သငျသညျမှန်ကန်သောအရာခပ်သိမ်းကိုစစ်ဆေးဘို့ 2. ကျွန်ုပ်တို့သည် PI စေမည်။
4. ကျနော်တို့ ASAP အထုပ်စီစဉ်ပါ။
Paypal, အနောကျပိုငျးပြည်ထောင်စုနဲ့ T / T က
နမူနာအလို့ငှာ: 1-3 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းအစုလိုက်အမိန့်: 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း
shipping လမ်း: ဒီတော့အပေါ် DHL, UPS, EMS, TNT, FedEx နှင့်
1. OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် Professional က R & D နှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့်အတူ။
2. လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်လိမ္မော်ရောင်ထုတ်ကုန်သင်တို့ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့် client များအတွက်စောင့်ဆိုင်း။ -
ငါတို့သည်ကိုယ်ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ရုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ecig စက်ရုံရှိသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်, အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းများဖြစ်ကြသည်။
-Come ပေါ်နှင့်ဥစ္စာရ! စတော့ရှယ်ယာထံမှသင်္ဘော!
ယခင်: 14mm အချင်း၏ Atom နှင့်အတူလက္ကားစျေးနှုန်း JUSTFOG P14A Compact Kit
နောက်တစ်ခု: System ကိုပါ E-cig Kit 100% အီးယူ TPD ကိုက်ညီ Justfog P16A ဖွင့်လှစ် Childproof
Alternativa တစ်ဦးက Justfog
အီး Sigaret Justfog Maxi
အီး Sigaretta Justfog
Justfog တစ်ဦးက Cotone
Justfog တစ်ဦးက Quanti Volt
Justfog တစ်ဦးက Quanti Watt
Justfog E ကိုဖျော်ရည်
Justfog အီး Zigarette
Rigenerare Justfog တစ်ဦးက Cotone
2017 နောက်ဆုံးပေါ် Childproof ဖွင့်ပွဲစနစ် E-cig Kit ...